Movie aphuma phambili wango 2006 - ukukhetha ephelele izivakashi abafuna ukuba simazi nge omkhulu wamabhayisikobho ashisa izikhotha ngezikhathi ezingekho, eyayibukiswa ezindaweni eziningi kuleli shumi leminyaka elidlule. Thriller, Drama, Comedy, nokuzidela - ngonyaka bekulokhu obehlale nge lezimanga kusukela abaqondisi abanamakhono. Ngumuphi kubo nibaluleke ngokuvakashela?
Movie aphuma phambili wango 2006: Drama
"UDeveli Igqoka Prada" - comedy idrama, igxile indaba intombazanyana wakwazi ukuthola umsebenzi njengoba umsizi ethandwa umagazini ecwebezelayo "yesikhulumi", hhayi kokuba nakancane mayelana ezweni fashion. Isimo luyindida lapho kuvela ukuthi ubasi wakhe omusha - ungusathane ngempela. Lesi sithombe, ezihlekisayo futhi kudabukisa ngesikhathi esifanayo, kubalulekile ukubheka umdlalo emangalisa kakade Meril Strip, okuyinto ngofuzo indima umbusi "yesikhulumi".
Iklelisa amabhayisikobho engcono ka 2006, angeke anganakwa, futhi idrama ethi "Z00 iSparta," won izilaleli hhayi kuphela imiphumela ekhethekile, kodwa futhi indaba ethakazelisayo. Ngemva kokubuka le movie, ungafunda kabanzi mayelana nomhlaba okuyimfihlakalo amaqhawe engcono endala, okuyinto kufanele kubhekwe abakhileyo Sparta. Uzungu kubolekwe uchungechunge imisebenzi Frenka Millera, lumayelana impi ye Thermopylae.
Yini ukubheka okuvusa usinga
Movie aphuma phambili wango 2006 - Yebo, hhayi kuphela idrama. Izibukeli abathanda yesehlakalo emehlweni okuyinto zilimaze igazi e yakho emithanjeni, kungafaka ngokuphepha Thriller "I Usuke", iqondiswe Martinom Skorseze. Abafundi ababili wangaphambilini we Amaphoyisa Academy sisesimweni esinzima. Omunye yethulwa kuleli amaphoyisa iqembu lobugebengu, omunye ezishaya unkulunkulukazi u-a Thug abasha ongaphakathi mafia isakhiwo. Bobabili bafuna ukubala futhi uqede isitha, kodwa ukuthi luyoba khona yini ubuqotho ezweni kwawo kwangaphakathi?
Ukukhunjulwa Kwalabo amafilimu best of 2006, ngeke ukwazi uma sibala Thriller umphenyi "I Da Vinci Code", esiqintini esithathelwe enovelini Dena Brauna. I protagonist tape - UProfesa, wamangalela ka ubugebengu obunobudlova. Ekuzameni ukuthola kweqiniso villain uhlamvu ishayisa imfihlo, uyakwazi ukuphuca amandla iSonto LamaKatolika ukudalulwa kwalo okungahle. Isibalo Izibuyekezo engakhi ifilimu kunzima ukubala, kodwa an amazing ibhokisi ehhovisi impumelelo kusikisela ewufanele ukubukela.
Movie aphuma phambili wango 2006 - ibuye ukujabulisa bomlilo, kusukela lapho kunzima agqashule, ngisho imizuzwana embalwa. Phakathi kwabo endaweni egqamile kuhlala "Mission Impossible 3", indima esemqoka okuyinto ngokuvamile eyenziwa Tom Kruz. Izethameli, esasithanda izingxenye odlule uzokwazi ukuphinde bahlangane ne-Ethani Hawke. I-ejenti uzama ukukhohlwa ukuthi ingxenye yokuphila lapho athi emsebenzini ukusebenza, ukusithatha coaching izindima ekugcineni ukwakha umndeni. Ngeshwa, esikhathini esidlule ngeke nimyeke ahambe.
Ngeke ngokuthi kanye 21 th kwendaba mayelana misadventures ka ngiyinhloli abadumile, edabula amafilimu best of 2006. Uhlu olusha isinyathelo adventure "Casino Royale," okuvumela ababukeli ukubona futhi ongenakulibaleka James Bond. Lesi sikhathi umlingisi udlala indima iqhawe abanesibindi Deniel Kreyg. Tape udutshulwe izindawo ezinhle kakhulu emhlabeni, ogcwele zezintaka eBahamas, amadolobha ezithakazelisayo-Italy. Indima intombi hlola Bond waya Eva Green.
Ukukhumbula ahlekisayo okujabulisayo
Yiqiniso, uhlu bhá okudaliwe directorial mahhala futhi ngaphandle amahlaya, ngaphandle okuyinto kunzima ukucabanga-movie ka 2006. Uhlu amabhayisikobho engcono, yebo, lihlanganisa "Pirates zaseCaribbean. Dead Man Chest" Labo abaye abangakayitholi isikhathi ukubona lokhu comedy emangalisayo, kumelwe sikwenze. Lo mdwebo ingxenye indaba ethokozisayo, egxile ukuzidela Pirates kanye labo lwa them yesibili. Okuqhubekayo badunyiswa ngokunikwa kwehlombe umbukwane imiphumela ekhethekile, ukubuyekezwa ezibucayi mayelana nesakhiwo. Njengoba engxenyeni yokuqala, Starring Dzhonni Depp akunakuqhathaniswa.
Ngenhlanhla, lokho akuyona yonke amabhayisikobho best of 2006. Uhlu, okuhlanganisa i-comedy ezithakazelisayo, sihlanganisa i-tape "Little Miss Sunshine", okuyinto kwadingeka ibe yimpumelelo enkulu nomphakathi. Film eye eqoqwe eziningi imiklomelo kuyinto ukubhinqa, mbumbulu US ngokoqobo.
Kufanele abonisa isithakazelo ahlekisayo "Chofoza: Nge elawulwa kude ukuphila" kwezinye izindawo obala okusikhumbuza idrama. Kwakuyokwenzekani uma ezandleni abavamile baseMelika kuyoba idivayisi ngalo uzokwazi ukuphatha ezimpilweni zabo siqu, ezimazombe nje izikhathi "ungakujabulisi"?
Asinakusho ukuthi wonke ama-movie ezuzisayo 2006 ohlwini amabhayisikobho engcono iqukethe okunye imidwebo: "Ebusuku Museum," "Nqamula-Up," "X-Men:. The Last Stand"
Abalingisi ka "Titanic": izindima ezinkulu nezincane
Yini rum isiphuzo - isiphuzo bonke izikhathi.
National Library of Russia (Petersburg): Umlando, izisekelo, ikheli
Uma kuziwa 'Fast and the Furious 8' abayodla inkanyezi e ifilimu entsha, okuzoba indaba?